ụlọ ọrụ injin. --lọ ọrụ China
Dịka onye nwere traktọ nwere ọrịre na China, anyị nọ na YTO nwere ike ịrụpụta traktọ nwere ụkwụ dị iche iche, ebe ike dị site na 18 ruo 500HP ， Dika ọnọdụ mbanye ya, enwere ike ikewa traktọ wheeled n'ime traktọ nke 2WD na 4WD tractor. Site na injin ya ọ na-eji, traktọ wheeled na-agụnye 2 cylinder traktọ, 3 cylinder traktọ, 4 cylinder traktọ na 6 cylinder traktọ. Dabere na ngwa a kapịrị ọnụ, enwere ike kee traktọ ahụ tractor ...
YTO POWER na-enye ọkụ ọgbụgba ọkụ na mgbapụta mmiri setịpụrụ maka ndị ahịa anyị na igwe eji emepụta onwe anyị, ọkụ anyị na setịpụrụ mmiri pọmpụ nwere ike iru Australia, Middle East na Europe ọkọlọtọ, anyị nwere ike ịme mgbapụta ahụ dịka ihe ndị chọrọ ndị ahịa si dị mkpa. Ihe nfuli mmiri di iche-iche nke di n’ime mmiri nke ndi n’eto mmiri na nke obodo, igbapu mmiri, ma ndi nile n’eji eji agba mmiri, ime ka mmiri di ocha ma obu mmiri ndi ozo nke aru aru na nke mmiri yie nke di ocha. F ...
onye nyere aka
Mgbakọ na nnwale: 1. 1.Ma ọgbakọ mbu - 2.Atlas Copco Ngwa na Sistemụ Mgbakọ. 3.AVL dizel engine combustion analysis system 4.Diesel engine testing scene 5.Ọmụmụ ule dị elu na ebe njikwa 6.Nature gas engine testing scene YTO POWER na-enye YANGDONG na YTO usoro mmanụ dijital a na-esetịpụ, ike rang ụdị 10kva ka 500kva, ụdị mepere emepe na ụdị ịgbachi nkịtị, 50HZ na 60HZ. Uru na njiri mara 1. Igwe eji aka emeputa nke oma nke amam-ihe mara nma, bara ezigbo uru…